Ootitshala Amacebo okuFunda nokubhala
Izandi ezisibhozo eziphambili zikhona ngesiNgesi
I-diphthong ivela xa kukho izandi zombini ezikhethiweyo kwi-syllable efanayo. Ewe, igama elithi diphthong livela kwigama lesiGrike elithi diphthongos , elithetha "izandi ezimbini" okanye "izandi ezimbini." Kukwaziwa nangokuthi "i-voli ye-gliding", kuba enye isandi iyakwehla enye. Amagama athi "inkwenkwe," "kuba," "inkohlakalo," kwaye "ngaphandle" yimimiselo yamagama aqukethe i-diphthongs. IiDiphthong ziyakunikwa enye okanye ezimbini.
Funda ukuze ufunde okungakumbi malunga nokuba yiyiphi idiphthongs, ukuba kutheni zibalulekile ngolwimi lwesiNgesi, kwaye nokuba uyayiqonda njani.
Kukho ezisibhozo ze-diphthong ezisisiseko ngolwimi lwesiNgesi, ngokutsho koTutorEd kunye neStack Exchange. Bazi:
/ eɪ / njengemini , hlawula, zithi, zibeke
/ aɪ / njengebhakabhaka , uthenge, ukhale, ubophe
/ ɔɪ / njengenkwenkwezi, ithoyilo, i-coy okanye i-syllable yokuqala yesoya
/ ɪə / njengobhiya, i- pier , yiva
/ eə / njengoko kubhedu , ibini kunye neenwele
/ ʊə / njengokhenketho , ihlwempu okanye i-syllable yokuqala yezokhenketho
/ əʊ / njenge- oh, ha, ngoko, okanye ifowuni
/ aʊ / njengamazwi onke athi "Yeka njani inkomo emdaka!"
Iileta zokuvula (phakathi kwamanqaku e-slash ngaphambili) ziimpawu zetsingiselo ezisetyenziswe ngabahlalutyi bezazisi. Zenzelwe ukukhonza njengezikhokelo zokubhaliweyo, kodwa ngokwenene ufuna ukubazi ukuba ukhangelele elinye lamagama kwisichazamazwi kwaye uzibuze ukuba zeziphi iimpawu eziqhelekileyo. Iimpawu zomsindo zingakunika indlela elula yokuhlukanisa phakathi kwee-diphthong ezisibhozo.
Indlela elula kakhulu yokuqonda ukusetyenziswa kwamagama okuphambili we-diphthongs, nokuba kunjalo, ukujonga umzekelo kumagama kwi-diphthong nganye yesibhozo.
Ukuba ufundisa abafundi malunga ne-diphthongs, kunokuba luncedo ukubonelela izivakalisi ukubonisa. Ukwenza njalo ngomyalelo we-diphthongs ubhalwe kwicandelo elidlulileyo kwibali elifutshane, elimnandi lingenza le nto ingacacile kubafundi abatsha.
Ngoko, unakho ukuba:
Emva kokuba ndihlawulwe, namhlanje, ndithi ndiya kubeka imali phantsi kwetafile ( eɪ ). Emva kokujonga phezulu esibhakabhakeni, ndakhala emva kokuba ndithenge ityayi ( aɪ ). Le nkwenkwe edlala umdlalo yayingumngceli ( ɔɪ ). Ndiva ukuba basela ubhiya abaninzi kwi-pier ( ɪə ).
Iibini zeebhere ndidibene nazo kwizinkuni zenza iinwele zam zimi ekupheleni ( eə ). Uhambo lunikeza uluvo lweemeko ezihluphekileyo kweli lizwe-kodwa ndiyazi ntoni: Ndandishenketha kuphela. ( ʊə ). Oh hayi!! Kunzima kakhulu ukuthetha kwifowuni ( əʊ ). Hayi, ngoku kukho inkomo emnyama kakhulu ( aʊ ).
Unako ukunika abafundi uluhlu lwamagama kunye ne- diphthongs kwaye bawenze izivakalisi zabo.
Kukho izandi ezidibeneyo ngesiNgesi apho izibhenqo zenza izandi ezintathu ezihlukeneyo kwisilayidi esisodwa, ezibizwa ngokuthi i-triphthongs. Ezinye izibonelo ezibonelelwa ngeNgesi ye-EFL ziquka:
/ eɪə / njengoluhlu, umdlali
/ aɪə / njengoko kubhalwe, umlilo
/ ɔɪə / njengokwethembeka, ubukumkani
/ əuə / njengokuba kuncinci, umbane
/ okanye / njengamandla, iyure
Esi songezelelweyo, okanye sesithathu, isimboli esibonisa ukuba ezi zi-triphth, "ə," i- phoneme ebizwa ngokuba yi-schwa kwaye ibizwa ngokuthi "uh." Kwezinye izibhengezo ezongezelelweyo, zinike abafundi bakho izivakalisi ezimbalwa eziqukethe i-triphths, ezifana:
Umdlali wayenomdlalo omkhulu kwiqela lakhe ( eɪə ), kodwa xa efika ekhaya indlu yakhe yayisemlilweni ( aɪə ). Ekubeni wayenyanisekile kwinkundla yasebukhosini ( ɔɪə ), ukumkani wamnika intengo esezantsi yomlambo omtsha ( əuə ). Ngeyure, wayenomshini osebenza ngamandla.
Ngokuqinisekileyo, akudingeki usebenzise izivakalisi ezingummiselo, kodwa ngokuphindaphindiweyo ukubonisa iingcamango ezintsha kwiingoma, imivalo kunye nezivakalisi eziqhelekileyo kunokugxininisa abafundi kwaye bancede bafunde umqondo.
Amazwi eDolch Amagama eWonga zeeDonga
Regan kunye neGoneril yeBala
Ngaba Ndifuna i-MSW, i-PhD okanye i-DSW kwiNkqubo yoLuntu kwiNtlalo?
Quotes Albertus Magnus
Indlela yokubhala incwadi ngoJamani: Ifomathi kunye neelwimi